स्थायी कमिटी बैठकमा हामीले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेकै छैन् : भीम रावल « रिपोर्टर्स नेपाल
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीम बहादुर रावलले पार्टीको जारी स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकमा आफूहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना नगरेको जिकिर गरे । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको ‘नेपाली बहस’ का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै रावलले भनेका छन्–‘त्यो बैठकमा हामीले आलोचना गरेकै छैनौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको पार्टी कित्तामा जाओस् । विधि, प्रणालीबाट चलोस् । राष्ट्रका जल्दाबल्दा कुराहरुमा पार्टीभित्र छलफल र बहस होस् । सामूहिक निश्कर्ष निस्कियोस् । पार्टीमा पक्षपात र मनपरी नहोस् । नेपाली जनताले बडो विश्वासका साथ बहुमत दिएका छन् । भरोसा गरेका छन्, त्यो कायम होस् भनेर कुरा उठाएको हो । हामीले कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर आलोचना गरेका होइनौं । प्रस्तुत छ रावलसँग धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
उहाँको चित्त दुखेको छ, छैन । त्यो तपार्इंंलाई नै थाहा होला मलाई थाहा छैन । हामीले त पार्टी, जनता र देशको बृहत्तर हितमा काम गर्नुपर्छ भनेका छौं । त्यो कुरा भन्दा कसैको चित्त दुख्छ भने अब हामीले भन्ने के हो ? त्यसको बारेमा पनि बसेर छलफल गर्दा भइहाल्यो नि ।
म त त्यो अवस्थाको परिकल्पनै गर्दिन् । पार्टीको नेतृत्व गर्छु भन्ने व्यक्ति, देशको नेतृत्व गर्छु भन्ने व्यक्ति पार्टीका बैठकमा उपस्थित हुन नचाहने र पार्टीका नेताहरुले उठाएका कुरा म सुन्नै चाहन्न भन्ने कुराको म परिकल्पना नै गर्दिन् । यदि कुनै व्यक्तिलाई कसैका कुरा सुन्नै मन छैन भने बैठक नै नबोलाए भइहाल्यो नि । तपाईंहरुका यी-यी कुराहरु मलाई सुन्ने इच्छै छैन भन्दिए भइगयो नि । अब उहाँ किन आउनुभएन त्यो कुरा त हामी उठाइहाल्छौं । त्यसकारण म फेरि दोहो¥याएर के भन्छु भने पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्ति त्यो पनि देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहनुभएको व्यक्तिले पार्टीको बैठकमा आउनुपर्छ । उठेका कुराहरु सुन्नुपर्छ । आफ्ना भनाइहरु के हुन् ती राख्नुपर्छ । अरुका भनाइ गलत भए त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ । ठीक छन् भने ती कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, विधि, पद्धति र सिद्धान्त हो ।
यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग नेपालले गरेको सम्झौता नेपालको हित, हाम्रो शासन प्रणाली, नेपालको कानुन र हामीले अपनाएको बाटो केहीसँग पनि नमिल्ने र एउटा कम्पनीले हस्ताक्षेर गर्ने र त्यो कम्पनीमार्फत एउटा देश हुने हुनाले पारित नगरौं भनेको हो । यदि ती गलत कुराहरु सबै हटाइयो भने अमेरिकासँग अनुदान लिने कुरामा हाम्रो विमति पनि छैन । अमेरिकासँग हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह पनि छैन । जहाँसम्म म्यादको कुरा छ–त्योपनि नेपाली जनतालाई भ्रमित बनाउने काम भएको छ । पहिला वर्षमा भएन जान्छ भनियो । त्यसपछि सेप्टेम्बरमा भएन भने जान्छ भनियो । अहिले असार १६ गते भएन भने जान्छ भनियो । यदि यो जान्छ भने जान्छ त । File Photo/ReportersNepal